Federasion’ny baolina kitra : Tsy mahafehy ny andraikitra sahaniny -
AccueilSongandinaFederasion’ny baolina kitra : Tsy mahafehy ny andraikitra sahaniny
18/10/2018 admintriatra Songandina 0
Efa tsy mahagaga. Tsy mahafefy ny andraikitra sahaniny mihitsy ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). Raha toa mantsy ka nisehoana tranga nahafatesan’olona ny lalao nihaonan’ny Barea de Madagascar sy Senegal, dia mbola nahitana tranga indray koa ny ekipa nasionaly, ny talata 16 oktobra teo, rehefa avy niatrika ny fihaonana tamin’i Guinée Equatoriale. Raha ny vaovao voaangona, nobahanan’ireo mpianatr’i Vontovorona ny lalana, ary dia notorahin’izy ireo sy novelivelesin’izy ireo ny fiara nitondra ireo mpilalao mandrafitra ny Barea de Madagascar.
Ny ekipa nasionaly hiatrika, na avy niatrika fihaonana iraisam-pirenena, raha ny lôjika, dia tokony harahina mpitandro filaminana mba hiarovana ny ain’ireo mpilalao. Raha ny fantatra anefa, marobe ireo mpitandro filaminana niasa sy tazana teny an-toerana, saingy tsy nisy nandray andraikitra fa toa miandry ny baikon’ny FMF. Ity farany rahateo, tsy mahalala intsony ny andraikitra sahaniny, fa dia manao izay saim-pantany fotsiny.
Ankoatra izay, miraviravy tanana ihany koa ny federasiona mahakasika ilay mpanazatra vahiny, Alain Dupuis, mpanazatra ny Barea, ary nahatafita an’i Madagasikara hiatrika ny Can 2019. Raha ny nambaran’ity mpanazatra ity mantsy, mbola tsy nifampiraharaha tamin’ny FMF izy mahakasika ny fifanaraham-piaraha-miasa eo aminy sy ny FMF. Izany hoe, tsy mandray karama avy amin’ny federasiona ity mpanazatra ity. Noho izany, hoy izy, miandry ny fifidianana eo anivon’ny FMF izy amin’ny fanatanterahana na tsia ny fifanaraham-piaraha-miasa. Izany rehetra izany, tsy misy voafehin’ny FMF.
Anisan’ireo filoham-pirenena 193 mandray anjara amin’ny fivoriambe faha-72-n’ny firenena mikambana atao any New York, nanomboka ny 12 septambra lasa teo, ary hifarana ny 22 septambra ho avy izao, ny Filoham-pirenena Malagasy, Hery Rajaonarimampianina. « Atao laharam-pahamehana ...Tohiny